Bralmaran Geeraar jaceyl 2020 28.07.2021 28.07.2021 Comments
Dadka qaarkiis ayaa laga yaabaa inay doorbidaan muuqaalka muuqaalka jacaylka ee ka sarreeya dareenka asalka erayga. Falsafad ahaan, jacaylku waa fikrad aan la taaban karin. Aniga dareen ahaan, maskaxiyan, iyo ruux ahaanba waxaan isku xiraa laba maskaxood.
Kuwani waa saddexda atam ee sameeya jacaylka dhabta ah. Xiriir ma ku jirtaa? Oo miyaanad ka war qabin waxyaabaha qaarkood ee aad samayn kartid si aad u qarxiso maskaxda lamaanahaaga? Uma baahnid inaad ka walwasho maxaa yeelay waxaan hayaa erayo dhiirigelin iyo kalgacal badan leh oo aad u adeegsan karto inaad ku kasbato fikirka lamaanahaaga adigoo adeegsanaya Wadahadalka Whatsapp ama dhexdhexaad kasta oo kale. Waa inaad ka dhigtaa lammaanahaaga inuu dareemayo inuu muhiim ku yahay xiriirka kaliya adoo iibsanaya hadiyado, laakiin sidoo kale inaad ku darto waxoogaa uunsi ah iskuxirka si aad u muujiso inaad daryeesho.
Qof kastaa wuxuu jecel yahay jacaylkiisa inuu sameeyo wax duurjoog ah iyo jacayl. Si aad lammaanahaaga ugu soo jeedin jacaylka adiga kuu ah, waa inaad si joogto ah ugu dirtaa farriimo jacayl oo xiiso leh oo dhiirrigelin ah. Wax kasta oo aad sameyso iyo wixii aad tidhaahdo, waxaad iga dhigeysaa inaan dareemayo mid qaas ah. Jacayl baan kugu qabaa. Markasta oo aad ka fogaato aniga, ayaa aan kuu sii dhowaanayaa. Qalbigeygu markasta wuxuu ii sheegi doonaa inaad tahay gacaliyahayga, xitaa hadaanan wax dhihin.
Jacaylku waa sida cadceedda oo kale. Waxay qofka siisaa u siisaa iftiin dhalaalaya. Oo waxaa jira dareen diiran oo dhan jirka. Waxay kala furtaa indhaha waxayna kicisaa ruuxa. Markay dhammaatana, waxay ka tagtaa raad xiddigo yaryar ah si loogu wargeliyo adduunka inay weli jirto. Waligey qof uma jeclaan sida aan kuu jeclahay, mana qiyaasi karo inaan jeclaado qof kale.
My macaaney, waan ku jeclahay! Jacaylka, xiisaha, daryeelka, iyo taageerada ayaa ah macnaha runta ah ee adiga. Laguma barbar dhigi karo qof kale. Baby, waan ku jeclahay In kasta oo aadan jir ahaan joogin, haddana waxaan dareemayaa joogitaankaaga, isku duubni iyo inaad i hayso. Gacaliye, aad ayaan kuu jeclahay. Waan jeclahay qosolkaaga joogtada ah; dhaqankaaga dagan iyo jacaylka nacaybku wuxuu igu kallifaa waalli wuxuuna igu dhaliyaa inaan kaa fikiro markasta.
Gacaliye, waan ku jeclahay. Jacaylka aan kuu qabo wuu sii kori doonaa halkii aan ka libdhi lahaa, oo waxaan sii noolaan doonaa inaan aad kuu sii jeclaado. Marnaba kama qoomameyno inaan ku jeclahay, gacaliso, maadaama aan ku jeclahay macnaheedu waa inaan sameeyay wixii saxda ahaa.
Xitaa haddii aad fogtahay, waxaan kugu arkaa riyooyinkayga habeen kasta, oo waligay ka joogi maayo ka fikirkaaga. Aniga ahaan, adigaa kaligaa ah.
Waan ku jeclahay geerida. Waxaad tusaale fiican u tahay jacaylka dhabta ah; jacaylkaaga ayaa jacayl xun oo dhan qalbigayga ka saaray; Gebi ahaanba waan kula jeclahay, gacaliso.
Jacaylkaagu waa sida neecaw qabow oo ka timaadda webiga habeenkii, ama falaaraha qorraxda maalintii. Qalbi aan iin lahayn, adigaa ugu fiican. Runti waan ku jeclahay, macaanto! Ma sahlana in la helo qofka saxda ah, laakiin waa mahad Ilaah, waan ku helay; waxaad tahay midii aan raadinayey.
Xabiibi, si dhab ah ayaan kuu jeclahay. Dadku waxay ku andacoodaan in ku jeclaantaadu ay xanuun badan tahay oo u baahan allabaryo badan.
Laakiin waxaan door bidi lahaa inaan silciyo oo aan bixiyo allabaryo badan intii aanan kugu caabudin, gacaliyahaygow. Waxay imaaneysaa meesha aanan hubin sida aan kuguula kulmay; waxaad tahay qofka kaliya ee noloshayda wax ka badali kara.
Waan ku jeclahay, gacaliso. U oggolow iftiinka inuu ka ifo jacaylkeenna, oo u keenaya inuu xitaa ubax yeesho, roobkuna u qoyo una sababo inuu soo kobco. Qalbi macaan, waan ku jeclahay! Waan hubin doonaa inaan sameeyo wax walba oo aan karo si aan u noqdo nuskaaga ugu fiican. Waan ku jeclahay, gacaliso! Ma awoodo inaan ku waayo qof kale, markaa fadlan ha siin qalbigaaga qof kale, gacaliye.
Jacaylka aan kuu qabo waligiis ma libdhi doono, wax kastoo dhaca. Xaalad kasta oo jirta, waan ku garab istaagi doonaa. Waan ku jeclahay adiga sababta oo ah sida aan dareemayo marwalba oo aan kula joogo, maahan wax aad heysato darteed. Ma aanan ogeyn waxa uu jaceyl yahay ilaa aan kula kulmay, ka dibna waxaan daah furay waxa uu yahay jaceylka dhabta ah markii aan kala fogaanay.
Waan ku jeclahay. Waxaan isku mashquuliyaa waxyaabo badan oo aan ku guuleysto, haddana weli waan kaa fakaraa mar kasta oo aan nasto. Nolosha ma qiyaasi karo adiga la'aantaa, macaanto. Jacaylka aan kuu qabo, macaanto, waa mid dhab ah oo aan kuu doorto inaad noqoto midka kaliya ee aan weligay caabudo.
Waxaan noqon doonaa daruurtaada cirka, garabkaaga inaad ku ooydo, oo waan kuu joogi doonaa markasta oo aad ii baahatid. Waxaad ka badan tahay milyan doollar, haddana waxaad ka mid tahay hal milyankii. Macaanto, waan ku jeclahay. Dhoola cadeyntaadu waa sida qorraxda oo kale, waxayna iga dhigeysaa maalinteyda.
Kuma caawin karo laakiin waan kuu dhici karaa maxaa yeelay fikradahaaga maskaxdayda ayaa sameeya heesta ugu quruxda badan. Waxaan is arkay anigoo dhoola cadeynaya sabab la aan maalin maalmaha ka mid ah, ka dibna waxaan gartay inaan adiga kaa fikirayo. Haa, waan khaldan nahay, laakiin jacaylka dhabta ahi wuxuu noo badali doonaa dad aan iin lahayn. Nolosha marka laga soo tago, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aan daryeelo, tan koowaad waa jacayl, tan labaadna waa adiga.
Waxaan kugu jeclahay wax kasta oo aad tahay, wax kasta oo aad soo jirtay, iyo wax kasta oo aad noqon doonto. Waad ku mahadsantahay adkeynta inkasta oo aad hayso sabab kasta oo aad ku tagi karto. Aad baad ugu mahadsantahay inaad nolosha ka dhigtay mid fudud markii arrimuhu adkaadaan. Waxaan ka fekerayay adiga tan iyo maalintii aad noloshayda ku istaagtay. Waxaad tahay sababta aan u neefsan karo. Waxaad tahay qorraxda, iyo dayaxa, iyo xiddigaha samadayda ku jira.
Ma jirto waddo aan si kale oo kale ku doonayo. Waxaad tahay qofka kaliya ee kaliya ee noloshayda jecel. Honey, waan ku jeclahay Waqti dheer kahor intaanan kula kulmin, kahor intaadan waligaa dunidan ku dhalan, waan ku riyoon jiray. Aadna waan ugu faraxsanahay inaad adigu hadda tayda tahay. Waxaan ka rajeynayaa inaan waligeen wada joogno markasta oo aan hammi sameeyo.
Waan ku kalsoonahay inay taasi dhici doonto maadaama aad boos gaar ah ku leedahay qalbigayga. Waxay u egtahay in adiga oo ku jecel uu yahay mid dabiici ah sida neefsiga oo kale. Sideen ku joojin karaa? Bal eeg kumbuyuutarka; U iyo Anaga ayaa is xiga. Taasi waa sida alifbeetada loo abaabulo madaama jaceylkeyga aan dhamaaneyn ee aan kuu qabo waligiis tagi doonin inta aan aniga iyo adiga wada joogno.
Laakiin markii aan ku arkay waxaad moodaa in cirka iga sarreeya ay iftiimiyeen hal milyan oo xiddigood. Way adag tahay in la helo qof kula dhegi doona dhammaan heerarka nolosha iyo dhibaatooyinka soo noqnoqda. Waxaan u arkaa naftayda inaan aad ugu nasiib badanahay inaan ku haysto noloshayda maxaa yeelay waan ogahay in wax kastoo dhaca, jacaylka aad ii qabto uusan waligiis libdhi doonin.
Jaceylka marna lama qiyaasi karo. Kaliya dareenka ayaa ogaan kara. Waxaad ku rinjiyeysay nolosheyda midabada qaanso roobaadka. Inta jacaylkaagu ila jiro, wax kale uma baahni! Haysashada qof kula mid ahi waa dhacdo naadir ah. Maalin kasta iyo daqiiqad kasta, waan ku faraxsanahay hadiyaddan. Wax kasta oo noloshu nagu soo rogto, waan kuu sujuudi doonaa ilaa dhamaadka cimrigayga! Maalin kasta, waqtiga aan ku qaato inta badan, jacaylka aan kuu qabo ayaa badanaya.
Waxaan balan qaadayaa inaan ilaaliyo qalbigaaga jilicsan ee naxariista leh intaan noolahay. Jacaylka, waxay dhahaan, waa la dareemi karaa oo keliya, lama arko. Si kastaba ha noqotee, way qaldameen. Waa wax aan arkay marar badan.
Waxaa jirey ayaamahaan dad badan oo iga soo codsaday fariimo jaceyl oo adkeyn axdi ah haddaba maanta waxaan idin soo rogaya qeyb cusub ee ka bogasha wacan hana iloobina inaa subscribe dhahdaan YouTube-keena. Waxaa tahay noloshayda waxaadna i siisey sabab aan kugu jeclaado.
Indhaheyga waxey arken quruxdaada qalbigaana wuxuu i tusey qaayahaaga waxaadna dhab ahaan boos ku yeelatey qalbigeyga. Waxaan kaa doortey boqolal dumar ah taas ayaan kugu filan caddeyn inaan ku jeclahey kaasi waa jaceylkeyga waxaana kaa rajeynaa inaa ila qaado jaceylkan oo noqoto dhameytirkii noloshayda.
Lajirkaaga iyo jaceylkaaga waxkasta waan ku guuleysan karaa si aan guul ugu joogo igu xeernow abid. Waad ku mahadsan tahay inaa i siisey malyuumaad sabab ah oo u dhoola cadeeyo maalin kastaa. Markastoon arko dhoolacadeyntaada waxaan dareemaa kalsooni waayo qalbi ku jecel waan kan kuugu deeqa dhoola caddeynta hadyad ahaan. Dhib ma lahan si kasta oo aad iiga fog tahay deegaan ahaan balse ani waxaan aaminsanahey inaa ila joogto waayo mar hore ayaan wadnaheyga ku dajiyey! Kaliya ma tihid jaceylkeyga ee waxaad tahay noloshayda.
Waxaad tahay qofka kaliya aan subaxii ka fikiro kolkaan tooso, habeenkiina ku seexdo riyadana igula jooga kaligii! Xasuusta quruxdaada bilan waxey bishaa maalintayda iyo habeenkeyga. Sida dhulka uga dhargeyn biyo ayaaa anna uga dhargeyn aragaaga. Haddii aad ka heshay qoraalkaan fadlan share dheh asxaabtaadana la wadaag sidoo kale riix halkan si aad u daawato YouTube-keena hana iloobin inaa Subscribe iyo Share na siiso.
Lajirkaaga iyo jaceylkaaga waxkasta waan ku guuleysan karaa si aan guul ugu joogo igu xeernow abid. Waad ku mahadsan tahay inaa i siisey malyuumaad sabab ah oo u dhoola cadeeyo maalin kastaa.
Markastoon arko dhoolacadeyntaada waxaan dareemaa kalsooni waayo qalbi ku jecel waan kan kuugu deeqa dhoola caddeynta hadyad ahaan. Dhib ma lahan si kasta oo aad iiga fog tahay deegaan ahaan balse ani waxaan aaminsanahey inaa ila joogto waayo mar hore ayaan wadnaheyga ku dajiyey! Waa dareen xanuun badan Macaan inaad ku fekerto in qofkii aad aadka u jecleyd aad ka tagto adigoo farxad ka heli kara.
Xitaa hawada aad ku neefsaneyso Calaashaan Xaafadda aad dagantahay waan ka jeclahay dunida inteeda kale, mana qiyaasi kartid sida aan uga xumahay in aan kala tagno. Waxaa had iyo jeer ka fikireysaa sidii aad mar uun u soo xera gelin lahayd.
Geeraar Caashaq ah Oo Soo Jiidasho Leh Holac inuu yahay caashaqa, hurinaayo jirka, har iyo habeen haraadiyay nafta, hubaal midkuu hayaa garan. Barashada geeraar caashaq qaasatan geeraar soo jiidasho leh ma ahan sida cilmiga gantaalaha, halkaan ayaad ka baran kartaa.
Maxaa lagu gartaa Qofka markuu Caashaq hayo 1. Halaaqyo iyo daal joogta ah oo ay wehliso wadna garaac, Muuqaal qof oo ku horjooga mar walba oo aan jirin laakiin naftaada kaliya ay aragto, hurdo iyo soo jeed.
thoughts on “Geeraar jaceyl 2020”
Kazrale on Geeraar jaceyl 2020
Copyright © 2021 Geeraar jaceyl 2020. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.